Magic Earth Navigation & Maps 7.1.19.20.E3E23261.3973F9C4 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 7.1.19.20.E3E23261.3973F9C4 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
Application မ်ား ေျမပံုမ်ား & လမ္းညႊန္ျခင္း Magic Earth Navigation & Maps
Magic Earth Navigation & Maps ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ပင်အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်မရှိဘဲသင်၏ဦးတည်ရာဖို့အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းရှာပါ။ မှော်ကမ္ဘာမြေကိုသင်မောင်းနှင်မှုစီးခြင်း, စက်ဘီးစီးခြင်းတောင်တက်ခြင်းနှင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းကမ်းလှမ်းရန် OpenStreetMap အချက်အလက်များနှင့်အစွမ်းထက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။
•ကြှနျုပျတို့သညျသငျ့ကိုခြေရာခံကြပါဘူး။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပါဘူး။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာအတွက်ကုန်သွယ်မှုမထင်သော်လည်း, ထိုမှတပါး, ငါတို့ကမရှိကြပါဘူး။
•မိုဘိုင်းအင်တာနက်ကုန်ကျစရိတ်အပေါ်ကြီးမားသော Save နှင့် OpenStreetMap စွမ်းအားဖြင့်အော့ဖ်လိုင်းမြေပုံများနှင့်အတူယုံကြည်စိတ်ချရသော navigate ။ 233 နိုင်ငံများနှင့်တိုင်းဒေသကြီးများဒေါင်းလုပ်လုပ်ခံရဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။
• 2D, 3D နှင့်ဂြိုဟ်တုမြေပုံအမြင်များအကြားကိုရွေးချယ်ပါ။
•ခရီးသွားဘို့အဆင်သင့် Get နှင့်မျက်နှာပြင်, အခက်အခဲ, အကွာအဝေးနှင့်မြင့်ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုကဲ့သို့သင်၏လမ်းကြောင်းကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုအသေးစိတ်သိကြ၏။
•ကို up-to-date ဖြစ်အောင်နေပါနဲ့ပုံမှန်အခမဲ့မြေပုံ updates များကိုခံစားပါ။
•သင့်ကားတစ်စီး၏ကားရှေ့မှနျပေါ်သို့အရေးအပါဆုံးအညွှန်းအင်ဖိုမှန်းချက်ရဲ့ရသောအခမဲ့ head-up display (HUD) အင်္ဂါရပ်နှင့်အတူလုံခြုံနေပါ။
•မြန်နှုန်းကင်မရာများနှင့် ပတ်သက်. အသိပေးနှင့်လက်ရှိမြန်နှုန်းကန့်သတ်နှင့်အတူယနေ့အထိတက်နေဖို့ Get ။
•နေ့စဉ်မိနစ် updated Real-time အသွားအလာအချက်အလက်, ရယူပါ။
•မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူမြို့ပတ်ပတ်လည်ကိုရယူပါ။ အားလုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Modes သာပေါင်းစပ်ကြောင်းအများသုံးလမ်းကြောင်းကနေရှေးခယျြပါ: ဘတ်စ်ကား / မက်ထရို / မြေအောက် / အလင်းရထားလမ်း / ရထား / ကူးတို့
•လမ်းညွန်, လွှဲပြောင်းကြိမ်, ထွက်ခွာကြိမ်, မှတ်တိုင်များအရေအတွက်လမ်းလျှောက်ရယူပါ။ အခါမရရှိနိုင်, ကုန်ကျစရိတ်။
•နောက်လာမည့်နာရီအတွင်းမျှော်လင့်ထားနဲ့နောကျ 14 ရက်များအတွက်ခန့်မှန်းချက်ကြည့်ရှုရန်အဘယ်အရာကိုရာသီဥတုအခြေအနေကိုကြည့်ပါ။
Magic Earth Navigation & Maps အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Magic Earth Navigation & Maps အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Magic Earth Navigation & Maps အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Magic Earth Navigation & Maps အား အခ်က္ျပပါ
ortumatrix စတိုး 8.75k 1.33M
Magic Earth Navigation & Maps ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Magic Earth Navigation & Maps အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 7.1.19.20.E3E23261.3973F9C4
ထုတ်လုပ်သူ ROUTE 66
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.generalmagic.com/privacy
App Name: Magic Earth Navigation & Maps
Release date: 2019-08-02 20:03:18
လက်မှတ် SHA1: 37:05:BA:93:D8:6F:95:66:CD:B4:40:97:7E:65:C8:DF:66:05:14:AE
ထုတ်လုပ်သူ (CN): ROUTE 66
အဖွဲ့အစည်း (O): ROUTE 66 Switzerland GmbH
နယ်မြေ (L): Brasov
Magic Earth Navigation & Maps APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ